सरकारी टोली र डाक्टर गोविन्द केसीका प्रतिनिधिबीचको वार्ता निष्कर्षबिहीन
काठमाडौं । सरकारी वार्ता टोली र अनसनरत डाक्टर गोविन्द केसीका प्रतिनिधिबीच शनिबार पनि वार्ता भएको छ । तर वार्तामा कुनै ठोस सहमति हुन नसकेको सरकारी वार्ता टोलीका संयोजक तथा शिक्षा सचिव शान्तबहादुर श्रेष्ठले जानकारी दिए । केसीको माग र शनिबार भएको वार्ताका बारेमा आफूहरुले प्रधानमन्त्री....
प्रदेशसभा र प्रतिनिधिसभा चुनावका लागि दल दर्ता गर्न आयोगको आह्वान
काठमाडौं । प्रदेशसभा र प्रतिनिधिसभा चुनावका लागि ३० दिनभित्र दल दर्ता गर्न निर्वाचन आयोगले आह्वान गरेको छ । आयोगले सूचना निकालेर भदौ ११ गतेसम्ममा दल दर्ता गराउन राजनीतिक दललाई आह्वान गरेको हो । संविधानको धारा २७१ अनुसार राजनीतिक दलको रूपमा चुनावका लागि मान्यता प्राप्त गर्न....
सरकार र डा.केसीका प्रतिनिधीबीचको वार्ता सकरात्मक
काठमाडौं । अनशनरत प्राध्यापक डाक्टर गोविन्द केसीका मागका विषयमा सरकार र डा.केसीका प्रतिनिधीबीच शुक्रबार भएको वार्ता सकरात्मक भएको छ । केसीको माग अनुसार चिकित्सा शिक्षा ऐन तत्काल पारित गर्न सभामुख ओनसरी घर्ती मगरलाई शुक्रबार नै आग्रह गरिने भएको छ । विगतका सम्झौता अनुसार चिकित्साशास्त्र अध्ययन संस्थान....
तीन वटा जिल्लामा दुर्लभ वन्यजन्तु र वनस्पति सम्बन्धी पढाइ हुने
ताप्लेजुङ । पूर्वका तीन जिल्लामा दुर्लभ वन्यजन्तु र वनस्पति सम्बन्धी विद्यालयस्तरमा अध्यापन हुने भएको छ । ताप्लेजुङ, पाँचथर र इलाममा कक्षा ६ र ७ मा दुर्लभ वन्यजन्तु, रेडपाण्डा र विभिन्न वनस्पतिका विषयमा अध्यापन गराइने भएको हो ।
वातावरण संरक्षणका लागि भन्दै रेडपाण्डा नेटवर्कको पहलमा....
तिर्थ यात्राबाट ओली फर्कदै
काठमाडौं । तिर्थ यात्राका लागि तिब्वत गएका एमाले अध्यक्ष केपी ओली आज स्वदेश फर्कदैछन् । यात्रामा गएका ओली आज एकसातापछि स्वदेश फर्किन लागेका हुन् ।
उनी एयर चाइनाको विमानबाट स्वदेश फर्कदै छन् । धार्मिक भ्रमणमा मात्र भनिएपनि ओलीले तिब्तमा चिनियाँ कम्युनिष्ट पार्टीका उच्च नेता....
सरकार र डा. केसी बिच आज वार्ता हुँदै
काठमाडौ ।चिकित्सा शिक्षा बिधेयक पारित गरिनु पर्ने तथा चिकित्सा शिक्षा सुधारको माग राखेर पाँच दिन देखि ११औं अनसन बसेका डा. गोबिन्द केसी र सरकार पक्षबीच वार्ता हुने भएको छ । वार्ता आज दिउँसो साढे एक बजे सिंहदरबारमा हुने भएको हो ।
वार्ताकै लागि सरकारले बिहीबार....
एमाले अध्यक्ष ओली आज स्वदेश फर्किदै
काठमाडौं । एमाले अध्यक्ष तथा पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसँग चिनियाँ उच्च अधिकारी तथा कम्युनिस्ट पार्टीका नेताहरुले भेटवार्ता गरेका छन् । प्रसिद्ध धार्मिकस्थल मानसरोबरको निजी भ्रमणका क्रममा ल्हासामा रहेका ओलीसँग भेटवार्ता गरेका हुन् ।
ओलीसँग चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीको तिब्बत स्वशासित क्षेत्रका सेक्रेटरी तथा तिब्बत....
आयोगले भन्यो, ‘निर्वाचन सार्ने निर्णय मान्दैनौं’
काठमाण्डौ । निर्वाचन आयोगले प्रदेश नम्बर २ को मिति सार्ने निर्णयमा असहमति जनाएको छ । आयोगले सुरक्षा दिएरै भएपनि तोकिएकै मितिमा निर्वाचन गर्नुपर्ने भन्दै मिति सार्नेमा असहमति जनाएको हो ।
सरकार र राजपाबिच विहीबार दिउँसो निर्वाचनको मिति सारेर असोज २ गतेलाई तय गरेको थियो....
कोराना भगाउन भन्दै पटा पड्काउने १४ जना पक्राउ